Buufata xiyyaaraa Boolee, Finfinnee (suuraa faayilii)
Robii dhufu gaggeeffamu kan jiru filannoo Tigraay keessaa taajjabdummaan ilaaluuf kan gaafatan namoonnni 60 caalaa fi lammiin biyya Noorweey tokkoof ehamnii kennamuu komishinni filannoo Tigraay beeksisee jira.
Dhaabatii Tigraay keessaa kan Sab-Hidrii jedhamu yaada madaalawaa hin qabu jechuun TPLF biraa yaadii waan dhiyaateef jecha ehama taajjabdummaa dhabee jira.
Sabaa himaan biyya keessaa fi biyya alaa 15 caalaan bulchiinsa naannoo Tigraay seenuu isaanii kan ibse komishinichisabaa himaan ammaan dura Tigraay keessatti filannoon gaggeeffamuu hin qabu jechaa jiran ehama kan hin arganne ta'uun ibsamee jira.
Gama kaaniin oduu gabaasaan Raadiyoo Sagalee Amerikaa Saayman Maarks Wiixata har'a ganama oduu gabaastoota biyya keessaa 3 fi namoota ka biroo waliin xayyaara gara Tigraayti balali'uu seenuuf yeroo yaalanti tika nagaa biyyoleessaa fi tajaajiila nageenyaan dhorkamuu isaanii Twitarii irratti barreessee jira.
Bilbilli harka isaanii, kompuutarri harkaa ykn Laap Toopiin jalaa fudhatamee midiyaalee hawaasaa irraa waan maqaa ofiin banatanii qaban martii cufamuu ibsee jira.
Gama akaaniin dhaabbatii oduu Rooytars akka gabaaseetti Gazexxesoota 4 fi gurmuu gorsitootaaf xinxalaa gameessa kan ta'e nama tokkoo dabalatee yoo xiqqaate namnii 12 wiixata har'a xayyaara gara Maqaleetti balali'uu akka hin seenne dhorkamuu gabaasee jira.
Kanneen ugguraman kun akka jedhanti waa'een filannoo akka hin gabaafamne gochuuf kana godhan jedhu.
Kana ilaalchisee waajiira Mummicha Ministeeraa irraa deebii argachuuf gaaffiin dhiyeessine deebii hin arganne jedha Roytars.